Fikarohana momba ny firaisana Lin-Manuel Miranda, ilay namorona ny mozikan'i Hamilton, tamin'ny nahaterahan'i Aharôna Burr, izay namono an'i Alexander Hamilton tamin'ny doka - Reincarnation Research
Mariho fa tsy misy antony ara-politika ato amin'ity lahatsoratra ity.
Lin-Manuel Miranda ho teraka tamin'ny vatana vaovao indray i Aaron Burr sy ny fiainan'i Karma
Rehefa mozika Hamilton dia nanjary fahatsapana tany Etazonia ary naheno aho fa nosoratan'i Lin-Manuel Miranda, mpihira sady mpanao lisitry ny mpilalao Puerto Rican, dia nanontany tena aho hoe nahoana i Miranda no nandrisika ny hamorona hira iray hankalaza ny fiainan'i Alexander Hamilton.
Niahiahy aho fa nisy ny fiainana taloha sy ny fifandraisana karmika. Ny fisaintsainako avy hatrany dia i Miranda dia i Aaron Burr tamin'ny fotoana nahatongavan'i Atoa, raha namono an'i Hamilton tamin'ny ady niaraka tamin'ny pistols i Hamilton. Nahatsikaritra izany fa raha nanafaka ny fiainan'i Hamilton sy ny asany ara-politika i Burr, dia mety hanana faniriana hanangana an'i Hamilton amin'ny fahatsiarovan-tenan'ny vahoaka ny fanahin'i Burr amin'ny fomba fijery karmik.
Na dia tamin'izany fotoana izany aza, tsy fantatro ny fisehoan'i Miranda, hitako fa nifanaraka ny endriky ny endriky ny an'i Burr sy Miranda.
Tao amin'ny fikarohana an'i Burr, ny hany tokana azoko jerena momba ny tombotsoan'ny teatra na ny mozika dia nanambara fa nikarakara ny zanany vavy Theodosia i Burr mba hampiofanana mozika sy dihy.
Ao amin'ny fivoriana miaraka amin'i Kevin Ryerson, Ahtun Re, mpitari-dalana amin'ny fanahy izay nampitain'ireo fantsona Kevin, izay nampiseho ny fahafaha-manao ny fiainana teo aloha, dia manamafy fa i Lin-Manuel Miranda no vatana vaovao indray ao amin'i Aaron Burr.
Ny mahaliana, ilay mpampita vaovao malaza amin'ny mozika Hamilton dia i Aaron Burr. Noho izany, Miranda, toy ny fiverenan'ny vovoka indray ao Burr, dia miteny amin'ny feony manokana momba ny sarin'i Alexander Hamilton, mpilalao sarimihetsika.
Fiainana Taloha Taloha
Matetika ny fanahy dia mampiseho fahaiza-manao sy zavatra mahaliana mitovy amin'ny androm-piainany ka hatramin'ny androm-piainany. Raha hijery ireo tranga momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao indray izay mampiseho an'io fitsipika io dia mankanesa any:
Fiainana Talenta sy fitondrantena taloha
Noho izany, ny asan'i Aaron Burr ho toy ny tafika sy ny politika dia tsy mifanaraka amin'ny asan'i Miranda amin'ny maha-sehatry ny teatra. Ny olona dia afaka manana toetra ambany noho ny tombontsoany manokana. Ohatra, i Thomas Jefferson, izay renim-pianakaviana Burr, dia mpiangaly mozika ary mpanao politika.
Etsy ankilany, Lin-Manuel Miranda dia naneho fihetsiketsehana ara-politika, nihaona tamin'ireo mpanao politika amerikana nanoloana ny fanampiana ara-bola an'i Puerto Rico.
Mety efa niaina ny fiainany taloha i Burr ary nifantoka tamin'ny mozika sy ny teatra. Tokony hitadidy fa nandritra ny Revolisiona Amerikana, dia tsy dia nisy karazany firy tamin'ny mozika sy ny teatra. Ny fananganana ny firenena amerikana dia nanana lova Purita, izay heverina ho "asan'ny devoly" ny teatra.
Ny fiainana taloha Karma
Amin'ny famoahana ny fiainan'i Alexander Hamilton, izay nomena sary ankavanana, ankehitriny amin'izao fotoana izao ho toy ny mahery fo amin'ny Revolisiona Amerikana, i Miranda dia natsangana tamin'ny maty izay olona novonoiny nandritra ny fiainany taloha, Hamilton.
Misy fifandraisana karmika hafa tafiditra amin'izany tranga izany, toy ny Filoha John Adams dia iray amin'ireo mpisolo vava vitsivitsy an'i Aaron Burr. Ankoatr'izay, Adams dia tsy mpanohana an'i Hamilton, izay te-hanangana ady teo amin'i Etazonia sy i Frantsa. Nofoanan'i Adams ny fanirian'i Hamilton ho lasa Commander-in-Chief amin'ity ady natolotray ity, satria tsapan'i Adams fa eo amin'ny lafiny ara-bola sy ara-politika, ny firenena amerikanina nitsoaka dia tsy ho tafavoaka velona tamin'ity fifanolanana natolotra ity.
Manaiky ny mpahay tantara fa marina ny fanadihadian'i John Adams, na dia ny fanapahan-keviny hisorohana ny ady amin'i Frantsa aza dia nanjary resy tamin'ny fifidianana, satria i Hamilton, izay mpikambana tao amin'ny antoko politika iray ihany, ny Federalista, dia niasa tamin'i Adams tamin'ny fiezahana hifidy ny azy. mpiray dina politika.
Elon Musk, izay fantatra amin'ny maha-teraka indray ao amin'ny vatana vaovao an'i Thomas Edison, dia manalavitra ihany koa i Karma miaraka amin'i Nikola Tesla
Araka ny Lin-Manuel Miranda | Toa nanan-karama tamin'ny fanahin'i Alexander Hamilton i Aaron Burr, toy izany koa no nitranga momba ny fiverenan'ny vovoka indray tamin'i Thomas Edison. Nifaninana mafy tamin'i Nikola Tesla ny Edison mikasika ny fomba hanomezana herinaratra ny rivotra, ny Amerikana, ny indostria.
Edison dia tia rafitra iray misy ifandraisany amin'ny Direct Electrical Current (DC), raha i Tesla kosa nampiroborobo ny famoronany ny Alternating Current (AC). Edison dia niady tamin'ny ady mangidy, nefa tamin'ny farany ny rafitr'i Tesla no nandresy.
Edison dia lehilahy mpanankarena tamin'ny fiafaran'ny androm-piainany, raha maty i Tesla mahantra tao amin'ny efitrano iray tao amin'ny hotely New Yorker.
Mino aho fa i Thomas Edison | Elon Musk dia nantsoina hoe orinasan-tsolitany Tesla tao anaty karmic nodany tamin'ny fahavalony taloha.
Mba hamerenana ny tranga vao teraka indray ao amin'i Thomas Edison | Elon Musk sy ireo mpiara-miasa taloha toa an'i JP Morgan, azafady mankany:
Thomas Edison | Elon Musk
Ny famerenana amin'ny laoniny an'i Alexander Hamilton
Etsy ankilany, ao amin'ny bokiko Fiverenan'ny revolisionera, Nohamarinina i Alexander Hamilton tamin'ny fiverenana indray tamin'ny andron'ny vanimpotoana ankehitriny Jeneraly Amerikana Alexander Haig.
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: Ny endriky ny endriky ny endrika nataon'i Aaron Burr sy Lin-Manuel Miranda dia tsy miova. Ny endriky ny tarehin'i Alexander Hamilton sy Alexander Haig koa dia mitovy.
Ny fiainana taloha sy ny fifandraisan'ny karmika: Alexander Hamilton dia novonoin'i Aaron Burr, izay teraka indray tao amin'ny Lin-Manuel Miranda, izay nampitovy ny karma tamin'ny fananganana ny sarin'i Hamilton tamin'ny vanim-potoana ankehitriny.
Ankoatra izany, toa toa ny fiainana taloha sy ny fifandraisana karmic teo amin'ny filoha John Adams, Aaron Burr | Lin-Manuel Miranda sy Alexander Hamilton.